Burcad lagu qabtey degmada Eyl
20 Nov 20, 2012 - 5:41:29 AM
Ciidamada Badda Puntland ee ku sugan degmada Eyl ayaa gacanta ku dhigay laba nin oo burcadbadeeda kuwaasoo doon ka soo raacay degmada Bayla kuna jeeday Garacad ,waxaana lagu qabtay deegaan la yiraahdo Gabac oo 50-KM dhanka waqooyi ka xigta degmada Eyl.
Gudoomiye ku xigeenka degmada Eyl ee gobolka Nugaal Faysal Khaliif Wacays ayaa Radio Garowe u sheegay in labadan nin ay siteen dhamaan agabka lagu yaqaan burcadda badaha sida Jaran-jaro,hub,ayana wateen dooni nooca Foolkaha loo yaqaano.
Wacays ayaa intaas raaciyey in nimankani ay ku xiran yihiin saldhiga ciidamada baddu ay ku leeyihiin degmada Eyl,wuxuuna xusay inay qirteen inay burcadbadeed.
Ciidamada Badda ee Puntland ayaa si xoogan uga
hawl-gala inta badan Badaha Puntland iyagoo Toddobaadka agagarka Boosaso ku qabtay Markab laga leeyahay waqooyiga Kuuriya kaasoo sibidh dhacay ku shubayey Badda.
Halkan ka dhagayso wareysiga C/Qani Irbad oo wareystey G/xigeenka More Articles